API ... Iza no manangana APUI? | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 28, 2006 Alakamisy 7 martsa 2013 Douglas Karr
Izahay dia efa nanana Application Programming Interfaces nandritra ny fotoana kelikely tao amin'ny indostria. Ny fanambin'ny iray API dia ny fitadiavana ireo loharanom-pahalalana ilaina amin'ny fandaharana ny fampidirana. Tsy mora izany. Mampiasà fiteny maoderina fandaharana maoderina, matetika dia takiana aminao ny mandefa miovaova amin'ny serivisy ary averina ny valiny amin'ny alàlan'ny XML (eXtensible Markup Language).
Tamin'ny taona 2000, niasa tao amin'ny Database Marketing Consultancy tany Denver, Colorado aho ary nanana fitaovana antsoina hoe Sagent Solutions. Sagent dia novidian'i Vondrona1. Group1 dia fantatry ny sehatra marketing amin'ny tahiry amin'ny fananganana rindranasa mahafinaritra sasany. Tsy azoko antoka hoe inona no nanjo an'ireo vokatra Sagent izay nampiasako taloha, saingy nahagaga. Eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery dia nanana 'fiovana' ianao ary afaka nitisika azy ireo hiditra amin'ny dalambe. Ny fampidirana sy fivoahan'ny tsirairay avy dia miova ho azy amin'ny fanovana manaraka.
Azoko atao ny manamboatra rindranasa hanafatra rakitra iray, hametahana ireo saha ho tahiry, hanova ny soatoavin'ny saha, hanadio ny adiresy, ny geocode ny adiresy, ny fanondranana ilay rakitra efa vita sns. Azoko natao mihitsy aza ny nanaparitaka ny workflow ary nanao maromaro dingana miaraka amin'ireo angona mitovy. Amin'ny famerenana ny 'back-end' ny dalambe iray, dia nitahiry ilay drafitra nampiasa XML i Sagent. Midika izany fa afaka manamboatra sy manatanteraka dalambe ianao raha tianao izany. Ny vahaolana dia vahaolana 6 isa, saingy ny fananganana drafitra hanodinkodinana trano fitehirizana antontan-kevitra dia naharitra minitra fa tsy andro.
Noho ny fisian'ny API, Serivisy amin'ny Internet, SOAP, Flex, Ajax, sns… Manontany tena aho hoe maninona no mbola tsy nisy nanangana Fampiharana Fampiharana Fampiharana Fampiasa Fampiharana amin'ny Aterineto. Raha lazaina amin'ny teny hafa, fitarihana drag and drop ho an'ny API miantso. Miaraka amin'ny SOAP, ny orinasa dia mitahiry WSDL (fiteny famaritana ny serivisy amin'ny Internet) izay rakipahalalana momba ny programa amin'ny fomba fampiasa ny serivisy amin'ny Internet. Tao anatin'ny dimy taona dia tsy nisy afaka namorona vahaolana amin'ny fandikana an API na Serivisy amin'ny Internet hananganana workflow ara-pahitana? Misy miasa amin'izany ve?
Ity ny hevitro $ 1 Miliara ho an'ny andro. Raha misy olona afaka manangana interface Flex afaka mamaky WSDL sy maneho ny antso an-tsary dia azonao atao ny manintona sy mampidina ireo fifandraisana eo anelanelan'ny antso. Io ilay rohy tsy hita ao amin'ny tranonkala… mahatonga ny tranonkala ho azon'ny olona 'mandahatra' ny vahaolana ho azy ireo tsy mila mahatakatra fiteny.
Tags: APIfampiharana interface tsaraapui